Industrial mitohy tamy Tyro Pyrolysis Equipment - China NIutech Tontolo_iainana
Industrial mitohy tamy Tyro Pyrolysis Fitaovana
Tamy Tyro Pyrolysis fitaovana Production Process
Ny tamy shredded Tyro dia ho araka ny tokony poti-kodiarana sy hatrany mba ho any an-reactor sakafo ho an'ny ara-dalàna ambany tsindry pyrolysis hafanana miaraka amin'ny mari-pana ambany solifara famindrana nampipoaka ny mafana amin'ny alalan'ny fitaovana nasiana tombo-kase.
Ny solika pyrolyst entona niova ho menaka sy ny solika kely combustible mandatsa-dranomaso (tsingerin'ny fampiasana rehefa miborosy) aorian'ny Zavatra Alaina avy, ary hihena amin'ny alalan'ny solika Separator.
Ny mafy Output manta sy ny vy mainty karbaona no hisaraka ny andriamby Separator. Ny manta mainty karbaona dia ho tonga dia nafindra tany ny karbaona mainty rafitra famokarana sy ny indostria mainty kilasy karbaona dia ho azo rehefa lehibe ny fizotry toy ny nitotoana azy, na dia ho afa sns hafa karazana avo-fitaovana sarobidy simika. Ny vy voatokana azo namidy toy ny korontam vy.
Ny combustible mandatsa-dranomaso dia ho tanteraka toy ny solika ampiasaina amin'ny rafitra rehefa miborosy dingana. Ny rafitra fanafanana mandany residual hafanana fanodinana teknolojia, izay lavitra fahavaratra fandaniana angovo sy ny ambany nihazakazaka nidina ny vidin'ny. Ny entona navoakan'ny tsipika ny famokarana dia ho voadio hitsena ny tontolo iainana navoaka fenitra avy eo.
Kodiarana shredding rafitra (tsy voatery)
Constant hafanana fanafanana rafitra
Continuous pyrolysis rafitra
Carbon mainty rafitra famokarana (tsy voatery)
Combustible entona rafitra miborosy
Gas rafitra fanadiovana
Oil distillation rafitra (tsy voatery)
Niutech Tontolo_iainana Teknolojia Ny Lafitsara
Industrial mitohy, goavana throughput, hanatsara fitsaboana fahombiazana sy ny famokarana fahaizany.
Hafanana ambany manokana pyrolysis teknolojia, ambany fanjifàna, hanatsara vokatra solika sy ny kalitao, azo antoka mandritra ny fotoana maharitra, mitohy ary kijanona miasa ny famokarana, be hanitatra fitaovana * mahatratra.
Irery anti-cocking, mafana distribution teknolojia, afaka ny fanazavana mitovy mafana sy? Pyrolized tanteraka, ny tratra kalitao avo vokatra.
Mafana fotsiny tombo-kase ny teknolojia, mba ho azo antoka asa azo antoka sy azo antoka.
Fanadiovana manokana mandatsa-dranomaso sy ny sisa hafanana fanodinana utilisation teknolojia, nanadio ny entona azo ampiasaina ho toy ny rafitra fanafanana combustible mandatsa-dranomaso, sisa dully hafanana azo ampiasaina, tena nahatsapa ny famatsiana ho an'ny fanehoan-kevitra tsy misy fanampiny pyrolysis fanafanana loharano, hamaivanina mihazakazaka be vidiny.
Exhaust entona-pamokarana efa notsapaina, fikirana émission rehetra hihaona amin'ny fitakiana ny Vondrona Eoropeana EEA ny Vondrona Eoropeana sy ny US EPA.
Pamokarana iray manontolo hanangana plc fanaraha-maso manan-tsaina, fampitandremana, fanairana sy ny Auto-fanitsiana ny asa, hetsika antoka fiarovana eo ambanin'ny toe-.
Low fepetra ho an'ny zavatra hafa, Low miasa mafy sy madio famokarana.
Fampitahana Tabilao "Fampitahana ny teknolojia amin'izao fotoana izao zava-misy eo an-toerana sy ny any ivelany"
Émission famaritana in fanarahana EEA fitsipika ao amin'ny Vondrona Eoropeana sy ny fitsipika ao US EPA
Ny toerana fotsiny nofidina mifanaraka amin'ny fampiasana feno fako kodiarana orinasa fidirana fepetra navoakan'ny MIIT
Core Patents (ampitan-dranomasina)
Previous: Solika distillation rafitra tsara indrindra High-Quanlity Products
Next: fako plastika ampiasaina tsara indrindra fanodinana High-Quanlity Cheap Products
Q: Inona no fahafahana ny fiaretana fa afaka manome?
A: Afaka manome 10000T / Y} 20000T / Y} 30000T / Y sy lehibe kokoa fahaiza-manaony
Q: Inona no karazana rafitra no afaka hanome?
A: Industrial mitohy tamy Tyro Pyrolysis Production-dalana; Industrial mitohy fako plastika Pyrolysis-dalana; Oil Distillation rafitra; Black Carbon koa fitsaboana System
Q: Ny Space Fepetra?
A: Raha ny 10,000T / Y-dalana, ny atrikasa ny pyrolysis fizarana dia 48m * 20m * 9m, izay manavaka Tyro (na plastika) shredding sy nahavita vokatra fitsaboana atrikasa
Q: asa Fepetra?
A ㄩ Tsy misy asa ilaina nandritra ny famokarana, fa noho ny fanaraha-maso, maso sy ny fitaterana. Raha ny 10,000T / Y-dalana, dia mila ny asa 3-4 / fiovana
A: Raha ny 10,000T / Y-dalana, dia mila ny 5-6 volana
Q: Hanao ny orinasa manome Onsite Installation sy hiverina-Key Project?
A: Fa ny Eoropa mihambo hanana fahaleovana mba hanome onsite fametrahana sy hiverina-Key Project; ho an'ny firenena hafa sy ny faritra hafa noho Eoropa, dia afaka manome fametrahana fanaraha-maso, fanofanana naniraka sy asa fanompoana.
Q: Ahoana no manaporofo fa ny teknolojia sy ny fitaovana no tena mandroso sy milamina ny iray any an-tsaha?
A ㄩ mikiry ny mitambatra isika theoretics sy ny fampiharana eo amin'ny fampandrosoana ny teknolojia. Manana asa nandritra ny taona maro azo ampiharina traikefa ny pyrolysis fototra ary nahita ka nanao ny fanavaozana sy fanovana mifanaraka amin'izany. Amin'ny Nandritra izany fotoana izany, ny ananantsika zavatra maro ara-barotra sy mpanjifa * mitohy nihazakazaka zavamaniry any amin'ny firenena samy hafa.
Q: Afaka manome toerana fitsidihana ny mihazakazaka fototra?
A: Eny, afaka manome mpanjifa efa ananana * s fototra ho an'ny fitsidihana toerana.
Q: Inona no fampiharana ny diloilo sy ny karbaona mainty
A: Ny solika famaritana mitohy vokarin'ny ny pyrolysis pamokarana dia mifanaraka amin'ny SH / T0356-1996 No 4 Light Fuel Oil. Ny vokatra menaka sarobidy manana hafanana avo sy iva solifara votoaty, azo ampiasaina amin'ny fandoroana, gropy sy ny diloilo hatao distillation manta sns distillation ny solika taorian'ny dingana azo ampiharina ny hery lehibe-ambany haingana solika maotera, injeniera sy ny fambolena fiara / an-dranomasina injeniera ary isan-karazany ny gropy.
Fa ny fampiharana ny Carbon Black, dia mifandraisa antsika hahazo bebe kokoa ny antsipiriany
tamy kodiarana pyrolysis fanariana
kodiarana fako pyrolysis fototra
fanariana fako kodiarana pyrolysis
kodiarana fako pyrolysis milina
Next: Plastic mandany tanteraka Pyrolysis Machine amin'ny Continuous Operation
Mitohy tamy Tyro Pyrolysis System
High Profit fako Tyro Recycling Plant
Hot Selling Oil Pyrolysis fanadiovana Machine
Plastic fingotra Machine
Pyrolysis Fuel solika Equipment
Pyrolysis Plant ao Gujarat
Pyrolysis Plant Plasti d fako
Tamy Tyro Pyrolysis System
tamy Tyro Recycling Machine
tamy Tyro Pyrolysis milina
Tech fako Tyro Recycling Plant
Tyro Oil Pyrolysis
Tyro Pyrolysis solika Plant
Recycling Tyro Machines To menaka
Tyro Recycling Plant To solika Oil
nampiasaina Tyro Recycling Pyrolysis Machine
Plastic mandany solika tsy voadio To Solika
Tamy ny fako plastika Tyro Pyrolysis
Fako Tyro Recycle To solika Oil
fako Tyro Recycling To solika Oil Machine
Fako Tyro Recycling Machine To menaka
fako Tyro fanadiovana To Fuel Oil
Fako Tyro To Diesel Plant
fako Tires To solika Recycle
Latest Teknolojia ny indostria Continuous niarahanao ...
High Oil Output mitohy fako Tyro mba tsolika O ...
Tamy Tyro Pyrolysis amin'ny Industrial Cont tokoa ...